Ihe niile ị ga-mara banyere iTunes U na iTunes U maka Android
A Full Guide nyefee Movies, Ndetuta egwu ọkpụkpọ, Pọdkastị na Music si iTunes ka Android
1. iTunes App maka Android
1.2 iTunes Alternative égwu
1.3 iTunes Ime égwu
2. iTunes U maka Android
Na-eto eto etoju nke aha na mahadum, ọzọ mgbe, ụmụ akwụkwọ ahụ onwe ha bụghị inweta ihe dị ukwuu site a okwu ihu ọha ruru ka mkpọchi na klas. N'otu, na-akwụ ụgwọ nke muta na-esiwanye kemgbe na ịrị elu. Abụọ ndị a ihe nwere mie ụgbụ uru nweela site ụmụ akwụkwọ, karịsịa ndị nke na congested klaasị. Ọ mere-achọ ihe imekwu mgbalị na akụkụ nke ọ bụla learner ma ọ bụrụ na ha nwere na-nweta kacha erite uru site ọ bụla n'ime ndị ọmụmụ ma ọ bụ klaasị. The internet awade a otutu amụta ihe onwunwe; ma nke a ghara ahaziri iji onye ọ bụla N'ezie. Nke a bụ ihe na-enye pụtara iTunes.
Ụmụ akwụkwọ si n'ụwa nile nwere ike ịnweta ndị kasị ibu n'ụwa online akụ center na izi ihe onwunwe site eduga mahadum na ụwa nnọọ n'efu. Ọ bụla na-amụrụ nwere ike ịnweta nnọọ ọ bụla N'ezie na ndị kasị ibu online izi katalọgụ; si amụ Shakespeare na-amụ nke cosmos.
Ndị nwere ike ghara ịghọta ndị nkụzi ha na mkpa inwetakwu nkọwa, ndị na-arụsi ọrụ ike ma na-achọ ịmụta na ọ laa ma ọ bụ ná nkasi obi nke obibi ha ma ụlọ, na ndị na-ghara imeli narị ma ọ bụ ọtụtụ nde dollar iji kwụọ ụgwọ maka N'ezie na ndị na-eduga mahadum nwere ike ugbu a na-enwe ohere-erite uru nke klas. The kwukwara uru bụ na i nwere obi ụtọ nke na ịnweta a dịgasị iche iche nke nkụzi.
Ọ bụ omume na-esonụ nwunye nke afọ, iTunes U ga-maa enye ọhụrụ pụtara-ahụ maka agụmakwụkwọ ụlọ ọrụ dị nnọọ ka m awụ ọsọ n'ugwu nyere ọhụrụ pụtara na music ụlọ ọrụ. Ebe mahadum adịghị irite si ikenye ọdịnaya na iTunes U, ha na-erite uru na ha sie ike ika-aha gafee ụwa, ha sie ike Alumni obodo na-enwe ohere iji kwụghachi ọha mmadụ.
Part 1. Gịnị Bụ iTunes U Part 2. Resources on iTunes U Part 3. A Sample nke Oru na Great ọdịnaya na iTunes U Part 4. Uru nke iTunes U Part 5. Olee otú Jiri iTunes U Part 6. Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ banyere iTunes U Part 7. Ndị ọzọ Alternative ngwa ọdịnala n'ihi iTunes U so Part 8. mere e nweghị iTunes on Android Part 9. Top 3 iTunes U Alternative App on Android Ngwaọrụ Part 10. Olee jikwaa na iTunes U Alternative ngwa ọdịnala n'ihi Android Ngwaọrụ
Part 1. Gịnị Bụ iTunes U
iTunes U bụ otu n'ime Apple ụlọ ahịa si specialized ebe na-enye ohere maka Higher Education Oru nke mmụta, na-abụghị uru izi oru na K-12 instutions na-emepụta ọdịyo na visual ọdịnaya na a na-ahụ mere maka na ndenye aha na nbudata na ka ndị na-amụ. Site mmekọrịta na mobile ngwaọrụ, ọrụ nwere ike uru nke ị na-elele ha izi ọdịnaya na ha onwe onye kọmputa ma ọ bụ Ịnwetacha uru ịrụ oge ha na-ege ntị ka ọdịnaya mgbe na-akwagharị.
iTunes U kwuru na malitere a afọ ole na ole gara aga (gburugburu 2007) na ole na ole mahadum na oru ikenye ọdịnaya na iTunes.
Part 2. Resources on iTunes U
Ọdịnaya na iTunes U ihu ọma mejupụtara N'ezie nkuzi, ụlọ nyocha demonstrations, egwuregwu ihe na campus njegharị n'etiti ndị ọzọ n'ụdị audios, videos, PDFs ma ọ bụ okwu akwụkwọ n'etiti ndị ọzọ. Karịrị narị atọ na mahadum na kọleji isonye na inye onyinye ọdịnaya ka iTunes U page. Ebe a bụ ụfọdụ nke mahadum na kọleji nke-eme ọdịnaya gaa na iTunes U
* Queen si University
* University nke South Florida
* Broome kọleji
* Reformed Theological Seminary
* Otis College nke Art na Kere
Na ike nke ndepụta nke mahadum na kọleji ndị nwere ha ọdịnaya na iTunes U nwere ike inweta ndị na-esonụ njikọ;
The omume na iTunes U nwekwara gụnyere ọdịnaya si na-abụghị-elu-akụziri oru. Ha na-agụnye ndị dị otú ahụ oru dị ka 92nd St. Y, The Museum nke Modern Art, Public Radio International na Smithsonian Folkways.
Egbu, ọ na-agụnye ọdịnaya site K-12 agụmakwụkwọ njikọ; ọdịnaya bụ site a dịgasị iche iche nke mba agụmakwụkwọ njikọ na ala ngalaba nke muta.
Part 3. A Sample nke Oru na Great ọdịnaya na iTunes U
Na ihe karịrị 300 mahadum na kọleji na-enye afọ ojuju, ọrụ nwere ihe dị ukwuu nke na-arụ ọrụ na-achọta ndị kasị mma nke ego. Pụta ìhè na ole na ole mahadum na kọleji nke guzo na ha N'ezie ọdịnaya nwere ike inyere aka na nnyocha na iTunes, ebe a bụ ole na ole n'ime ndị na oru;
Massachusetts Institute of Technology: MIT eruwo si ya ike na-anapụta online ọmụmụ na si otú rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ dị irè napụtara ọdịnaya na consciously incorporates online amụ (Otu ihe atụ bụ MIT si Walter HG Lewin si Physics N'ezie ọdịnaya). Ya nke ọzọ ike ihe na-agụnye Okwu Mmalite ka Computer Science na Programming, Okwu Mmalite ka Psychology, Single variable Calculus, Okwu Mmalite ka Biology, na Physics m: Oge gboo na-arụzi ụgbọala n'etiti ndị ọzọ. Ị nwere ike ịchọta isiokwu emetụ on nta ka ọ bụla N'ezie. On m awụ ọsọ n'ugwu U, MIT awade downloadable free ọdịnaya. I nwere ike ịnweta otu ọdịnaya ha website.
Stanford University: ụfọdụ ndị kasị ewu ewu nke Stanford University si ọdịnaya bụ An mgbede na Thomas Jefferson, Izi & Learning, Okwu Mmalite ka Robotics, Okwu Mmalite ka Chemical Engineering, Mma Arts, Nkiri Studies, History, History 122: History of US Ebe ọ bụ na 1877, Okwu Mmalite ka Linear Dynamical Systems, Philosophy, Historical Jesus, Journalism na America si Jesus. Ya N'ezie ọdịnaya bụ majorly si nọgidere na ọmụmụ nkewa na-agụnye ole na ole n'ime Undergraduate ọmụmụ.
UC Berkeley: ihe atụ nke ya ọdịnaya bụ History 5: European Civilization si Renaissance ruo ugbu. Alụmdi awade a ọnụ ọgụgụ nke ọmụmụ dị ka iTunes U; narị nke nkụzi, na ndekọ nke symposia, ihe omume pụrụ iche, panel mkparịta ụka n'etiti ndị ọzọ.
Yale University: ụfọdụ n'ime ọrụ ya na-agụnye; Olee otú dee a Business Plan, na Iwu n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Ọtụtụ n'ime Yale University-emeghe N'ezie omume ọdịnaya dị na m awụ ọsọ n'ugwu US Geological
Open University: ụfọdụ n'ime ọrụ ya na-agụnye; Ịgagharị Learning na Izi Ihe na Real na mebere Ụwa, L192 Bon pụọnụ: Beginners 'French Okwu Mmalite, L194 Portales: Beginners' Spanish, L193: Rundblick: Beginners 'German. The Open University ka ebibi onwe ya ka huu ndị ọzọ ihe nke ya ọdịnaya na-ezitere na m awụ ọsọ n'ugwu US Geological
University nke Oxford: ihe atụ nke ọrụ ya na-agụnye; General Philosophy, Chemistry kwantum arụzi ụgbọala, Cancer ndi na emepe emepe, Iwuli a Business: Entrepreneurship na ezigbo Business Plan. Ụmụ akwụkwọ na-amụ n'ozuzu ga-maa-erite uru site na ndị a ego.
University nke Cambridge: E nwere nke ukwuu nke na otu onye nwere ike ịmụta site University nke Cambridge si m awụ ọsọ n'ugwu U ọdịnaya. E nwere ndị dị otú ahụ ọdịnaya ka; Anthropology, na Finance & Economics
New Jersey Institute of Technology: 28 ọmụmụ dị ka nke February, 2010, ha gwa ọmụmụ sayensị na nkà na ụzụ, na ole na ole na Literatures.
University of California, Davis: dị ka nke February 2010, ọ ezitere 19 ọmụmụ, ọtụtụ nke na-na kọmputa sayensị, akparamàgwà na usoro ndu.
Ndị a bụ nanị ole na ole n'etiti ndị ụfọdụ ọtụtụ oru na nwere oké ọdịnaya na iTunes US Geological
Part 4. Uru nke iTunes U
1. ọ na-eri aka
Ọ dịghị mfe ịbanye ọnụ ụzọ ámá nke ndị dị otú ahụ prestigious mahadum dị ka Yale, Oxford, Cambridge, Harvard na MIT n'etiti ndị ọzọ. E wezụga rigorous usoro nke mbanye, na-eri maka ọtụtụ bụ ihe bụ isi na-akpata na-egbochi ọtụtụ ndị si isonyere ndị dị otú ahụ oru. Na iTunes U, ọ dịghị onye kwesịrị inwe ihe ngọpụ n'ihi na ha enweghị ihe ọmụma ahụ bụ oké mkpa ka arụmọrụ site na ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ ndị ọzọ oru. Ihe ọ bụla isiokwu ma ọ, Otú ọ dị mfe ma ọ bụ elu, e nwere ọtụtụ ozi nke ga-ahụ ị na-nghọta nke ọ bụla isiokwu, ma ọ bụ okwu ihu ọha N'ezie.
N'ihi na otu onye nkụzi, na-enwe ụmụ akwụkwọ na-ekiri N'ezie ọdịnaya site ọzọ mahadum dị ka Harvard, Yale na MIT tupu ya abịa klas nwere ike inyere aka welie nghọta N'ezie ọdịnaya. Ozugbo ha na-na klas, onye nkụzi nwere ike ugbu a na ha miri nnọọ emi na reflective mmụta.
2. Irè nnyefe nke N'ezie ọdịnaya na mgbasa ozi faịlụ
Research na-egosi na ojiji nke uche ziri ezi n'ihi na-amụta na-karịsịa hụrụ ma nụ na-enyere ndị na-amụ ịghọta echiche mfe. Ọ bụrụ na onye chọrọ incorporate video faịlụ na ọdịyo faịlụ n'ihi na ha na klas, ndị kasị mma nhọrọ ga-eji iTunes. iTunes awade oké nchekwa maka ndị dị otú ahụ faịlụ, karịsịa ndị na depụtara na UTexas ngalaba. Ụmụ akwụkwọ ahụ ike ahụ nyochaa ọdịnaya tupu na klas na mgbe ahụ onye nkụzi ga-eme nwetakwuo nkọwa na klas.
3. Time zọọ ndetu
Oge zọọ ndetu n'ime a video Njirimara na iTunes U bụ oké ngwá ọrụ na ndị nkụzi nakwa dị ka ụmụ akwụkwọ pụrụ ime ka ojiji nke na ime mmụta ha ahụmahụ.
Part 5. Olee otú Jiri iTunes U
iTunes U nwere ike ịbụ ihe ọ bụla mma karịa ihe interface awade; ọ bụ ọrụ enyi na enyi, ị adịghị mkpa ọ bụla ọzụzụ n'ihi na ị na-aga site na peeji nke.
Na-amalite na, ị ga-mkpa iji nweta iTunes arụnyere na kọmputa ha. Ọ bụ maka Mac sistem na windows ịwa usoro; anabata nke ọ bụla oke ime ụlọ gị na ibudata ya.
Na toolbar ahụ nke dị n'ofe n'elu nke isi na peeji, họrọ 'iTunes U'. Na nke a ị na-na iTunes US Geological Ozugbo n'ime, e nwere edemede site na nke i nwere ike na-agagharị ịchọta ọmụma gị mkpa. Ha na-agụnye; nhọrọ site akwụkwọ, isiokwu, kasị ebudatara ma lezie kwesịrị ịrịba ama ọmụmụ. The ọdịnaya bụ n'ụdị PDF, videos, audios, usoro nke okwu ihu ọha ma eBooks. Họrọ usoro nke na ị chọrọ ọdịnaya na ibudata ya. Ndị a ego otu ugboro ebudatara ike ga-eji site na kọmputa, ihe iPad, ma ọ bụ iPod.
Part 6. Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ banyere iTunes U
Q1. Ebe nwere ike otu ahụ iTunes U ngwa?
Zaa: The iTunes U ngwa nwere ike kpamkpam ibudatara na ngwa ahịa na ihe iPad, iPhone na iPod.
Q2. Nwere ike na iTunes U ngwa ịchọta mba ọ bụla nke nwere ihe ngwa ahịa?
Azịza: Ee, iTunes U ngwa nwere ike dị na mba ọ bụla nke nwere ihe ngwa ahịa.
Q3. Gịnị ka m mkpa iji jiri iTunes U ngwa?
* iTunes U ngwa.
* Ị mkpa nwere iOS 5 ma ọ bụ iTunes 10.5.2 ma ọ bụ mgbe e mesịrị ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPad, iPod na iPhone.
* Ị ga-enwe akaụntụ na iTunes ụlọ ahịa n'ihi na ị ka ibudata ọdịnaya site iTunes U katalọgụ .
Q4. Olee otú mmadụ pụrụ ịnweta iTunes U ngwa katalọgụ?
Azịza: Na iTunes U ngwa, enweta na iTunes U icon na-ele gị bookshelf. Na elu ebiet gị bookshelf, enweta katalọgụ button ikpughe iTunes U katalọgụ. Katalọgụ enye ihe karịrị 800,000 free N'ezie ọdịnaya agwa okwu, fim, videos na ndị ọzọ na mmụta.
Q5. Bụ ọmụmụ na ọdịnaya na iTune U ebudatara ikike m iPad, iPod na iPhone?
Azịza: Ee, mgbe ị na-enweta download button na gị iPhone, iPad na iPod, ihe na-akpaghị aka ebudatara gị bookshelf.
Q6. Enwere m ike iji kọmputa m ka ibudata ọdịnaya site iTunes?
Azịza: Ee, ị nwere ike, ma e nwere ọdịnaya na ga mkpa iTunes U ngwa-abụ dị, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na i nwere iTunes U ngwa.
Q7. Nwere ike otu ndabere ọdịnaya bụ ibudatara iTunes?
Azịza: Ee, ọdịnaya na ị na download si iTunes U katalọgụ dị maka eme a ndabere mgbe ọ bụla ị na-enwe ike synch ngwaọrụ gị na kọmputa.
Q8. Ndi iTunes U amachi ọdịnaya na otu onye pụrụ ibudata
Aswer: iTunes U adịghị amachi ọdịnaya na otu onye pụrụ ibudata na ha bookshelf na ha na ngwaọrụ ahụ; ya niile na-adabere na ohere dị na ngwaọrụ gị.
Q9. Gịnị ma ọ bụrụ na anaghị m chọta m andikpep N'ezie ọdịnaya na iTunes U?
Azịza: Ọ bụrụ na n'ihi otu ihe ma ọ bụ ọzọ ị na-adịghị ike ịhụ gị nkụzi si N'ezie ọdịnaya, pụrụ ịdị gị mkpa kpọtụrụ ya maka N'ezie URL, isi na URL n'ime ihe nchọgharị gị ka ịnweta N'ezie ọdịnaya.
Q10. Nwere ike otu ike ndetu?
Azịza: E nwere ihe inbuilt ndetu taabụ na iTunes ngwa na-enyere ọrụ ike ndetu n'ihi na a nyere N'ezie, ohere ibe edokọbara na akwụkwọ ndetu, na kwa mata ọdịnaya na akwụkwọ n'ihi na a nyere N'ezie iji ndetu taabụ. Iji nke a mma, gaa na ndetu bọtịnụ na enweta na akwụkwọ ndetu.
Q11. Ka iTunes U ngwa play vidiyo na ọdịyo faịlụ esịne ke N'ezie ọdịnaya?
Azịza: Ee, iTunes arụ niile vidiyo na ọdịyo faịlụ gụnyere na ihe ọ bụla ọdịnaya hụrụ na iTunes.
Q12. Bụ n'ebe ọ bụla irè ọzọ ka iTunes U maka Android?
Azịza: Ee, e nwere ọtụtụ uzo ozo ka iTunes U maka Androids, eg, tunesviewer, Ted wdg
Q13. Nwere ike iTunes U ga-eji na Android?
Azịza: Ọ dịghị, ọ bụghị ugbu a, ọ bụ nanị ndị e mere iji ga-eji na Apple ngwaahịa. Na-adịbeghị anya ozi ọma na-ekpughe na e nwere atụmatụ site Apple maka otu n'ọdịnihu.
Part 7. Ndị ọzọ Alternative ngwa ọdịnala n'ihi iTunes U so
1. SynciOS: Nke a bụ free ngwa àjà onye ọzọ na iTunes.
2. PodTrans: Nke a na-eji ngwa scores ukwuu na ekele na-ebufe faịlụ site na a na kọmputa na-ọ bụla e nyere ngwaọrụ. Ọ na-eji nyefee songs na vidiyo na iPads, iPods na iPhones na-enweghị iTunes enweghị erasing mbụ ọdịnaya. N'adịghị ka iTunes, ọ ka nwere ike na-eji nyefee faịlụ site mobile ngwaọrụ azụ ka PC-iTunes apụghị ime nke a.
3. Ecoute: The wijetị customizable ịchịkwa gị music na importing music, fim nakwa dị ka pọdkastị. Ọ na-enye Njikọta na Social media nyiwe. Air play akwado gụgharia music na inbuilt nchọgharị enyere maka music nhọrọ iTunes ọbá akwụkwọ na-akpọ.
4. Hulu Plus: Nke a na-eji ngwa na-enyere gị na-enwe kpochapụwo usoro gụnyere Battlestar na Lost Gallactica n'elu WiFi, 4G ma ọ bụ 3G. Ọ nwere ike na-traktị nke ihe ị na-ele na-aga na-ekiri ndị na-esonụ.
5. History: Ọ na-enye youw na nza nke ngosipụta. Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ ngosipụta chọrọ ile ọtụtụ, ị nwere ike ịmepụta a Watchlist maka ha. Inaddtionally, ị nwere ike inyocha nhọrọ nke mkpachị banyere ihe ndị kasị adọrọ mmasị edemede nke akụkọ ihe mere eme.
6. Plex: Ọ na-enyere jikwaa gị onye media n'agbanyeghị ebe ị na-enye. Na-ahapụ gị ụtọ gị media ọ bụla na ngwaọrụ. E wezụga na, na ị na-enwe ike enuba music, videos, foto na n'ụlọ fim gị iPhone, iPod Touch ma ọ bụ iPad si n'ụlọ gị na kọmputa na-agba ọsọ Plex Media Server.
Part 8. mere e nweghị iTunes on Android Ngwaọrụ
E nwere echiche site na onye nketa oke dị ka gbasara nke puru omume Apple-enwe ha iTunes na gam akporo. Echiche dị otú ahụ e kwupụtara site Steve Wozniak ngalaba-nchoputa nke Apple. Na-akpali mmasị, Apple ẹsiode ya ibu si mbụ Macintosh Company na-ya ugbu a na ọnọdụ mmalite na iTunes na iPad (nke a bụ n'agbanyeghị mbubreyo Steve Jobs ọ sị dị otú a aga nwere ike na-eme 'n'elu ozu-ya'). Ọrụ a na-bounced Apple ka elu elu nke azụmahịa N'eziokwu ibawanye ya ahịa òkè. iTunes e ported ka windows-eme ọtụtụ ọrụ ka ịnweta ọrụ na ukwuu ala. Ezie na nke a na-eje ozi na-Net na elu pasent nke Windows ọrụ, ndị na-na gam akporo nwere ike ọ gaghị obi ụtọ nke na-eji iTunes US Geological Ọfọn, na ìhè nke akụkọ ntolite ha, Apple pụrụ ịdị mkpa ka echegharị echiche ya atụmatụ dị ka n'ihe banyere ewu mgbidi gburugburu ha iOS na OSX.
Gam akporo ọrụ ga-mere uche na iTunes videos, iBooks, na iPhone apps n'etiti ndị ọzọ. Ya mere, ihe nwere ike ịbụ na-apụtaghị ìhè kpatara enweghị nke iTunes on Android?
Mbụ n'etiti ihe mere iTunes ghara ịbụ na gam akporo bụ ihe ịma aka na-abịa na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Mgbe migrating iTunes ka Android bụ ihe na ike na-dị nnọọ ntakịrị oge, dị otú a aga nwere ike inye ụfọdụ ịtụkwasị obi na n'elu ikpo okwu na ọ ga-migrating na. Apple bụ enweghị mmasị ọ bestowing dị otú ahụ ike-arụ ọrụ maka ịtụkwasị obi na a-atọ ndị ọzọ n'elu ikpo okwu.
Nke abuo, iTunes bụghị a isi ego earner maka Apple. Were ihe atụ iTunes U; ọ na-awa nnọọ n'efu. Apple akpata ukwuu site ya ngwaike karịa software. Dị otú ahụ ọrụ dị ka iTunes-pụtara na ha sikwuo ike ụdị na ahịa. Migrating ka Android ga-n'ezie na-eme ka onye na osompi si ngwaahịa.
Thirdly, Apple eji iTunes ka 'mkpọchi na' ya ọrụ site na ahaziri investments nke ndị ọrụ na iTunes music na fim nakwa dị ka izi ihe. Ọrụ na-emekarị nwere na-eche echiche ugboro abụọ tupu na-agbanwe agbanwe ọzọ n'elu ikpo okwu. Migrating iTunes ka Android ga-eme ka ọ dịkwuo mfe maka ahịa ka ịgbanwee si Apple si n'elu ikpo okwu ọzọ nke ga-emerụ azụmahịa.
Egbu, mgbe Steve Wozniak (ngalaba-nchoputa nke Apple) nwere ndị dị otú ahụ echiche, ọ dịghịzi bụ na Apple. Nke a na-ewelite ihe ịma aka na ekele Apple na-elu echiche dị otú ahụ, hazie ya na ụgbọala ya na-aga nke ọma, mmejuputa iwu-ọ bụ eleghi anya na Apple ga-ege ntị ma mejuputa echiche a.
Part 9. Top 3 iTunes U Alternative App on Android Ngwaọrụ
Onye ọrụ Nyocha
Udemy: Online Courses 18MB 3.000.000
Ted 5.1MB 5.000.000 - 10,000,000
Udemy-eme ka ndị kasị ibu n'ụwa ikpo okwu maka na-ina online ọmụmụ. Onye ọ bụla chọrọ na-ere a N'ezie online-Udemy ga-zuru okè n'ebe maka ha.
* Udemy obụrede mbụre nke n'elu 3 nde ụmụ akwụkwọ na 1000000 amụrụ otu kwa ọnwa.
* 16.000 gbakwunyere ọmụmụ na-ekpuchi ihe ọ bụla sitere na academia onwe kụziiri na ndị nwere mmasị isiokwu.
* The n'elu ikpo okwu bụ onye ọrụ-enyi na enyi na-eme ka ọ dị mfe ịchọ ọmụmụ.
* Ọ bụ free na-eme ọmụmụ na Udemy na ụmụ akwụkwọ nwere uru nke ị na-elele nile ọmụmụ nke ha mmasị nkụzi.
* N'ihi nkụzi, Udemy awade a ikpo okwu maka ịkpata si ndị 'ọmụmụ.
* Ihe karịrị 60% video na bụla N'ezie awa na Udemy
Download Udemy: Online Courses si Google Play Store >>
Ted bụ ihe kpọrọ abụghị uru nzukọ na mbak 'echiche uru na-agbasa'. Ọ na atụmatụ ụfọdụ ndị kasị ewu ewu na-ekwu okwu-Ted avails karịa 1000 18 nkeji inspirational okwu. Ọ na-ekpuchi isiokwu ndị dị ka nkà na ụzụ, ntụrụndụ, azụmahịa, imewe, mmadụ ikpe ziri ezi na sayensị n'etiti ndị ọzọ.
* Ted nwere onye ọrụ-enyi na enyi interface na "na-apụta Ted okwu" na etiti na n'ihu nakwa nwere taabụ na-enyere ndị ọrụ na-agagharị na site dum n'ọbá akwụkwọ ebe dị iche iche edemede.
* Ted-enye ohere maka nbudata na ịchekwa nke videos maka ojiji offline
* Ted-enye ohere maka na-ege ntị nanị maka videos-a na-abịa kemfe mgbe onye chọrọ multitask
* Ted nwere vidiyo na ndepụta okwu na ọtụtụ asụsụ.
Download Ted si Google Play Store >>
TuneSpace bụ ihe Android ngwa na-enye gị ohere iTunes media na pọdkastị gị akwụkwọ, mahadum, mahadum, nzukọ. Na ya, i nwere ike ime esonụ ihe:
* Creat ọmụmụ na-agagharị edemede na ọdịnaya dị ka ihe, N'ezie videos, audio E, ozi ọma, na ndị ọzọ.
* Easily ịkọrọ media ọdịnaya nke na-amasị gị na ndị enyi gị
* Save media na ngwaọrụ gị nke na-ekiri offline.
Download TuneSpace si Google Play Store >>
Part 10. Olee jikwaa na iTunes U Alternative ngwa ọdịnala n'ihi Android Ngwaọrụ
Ihe niile na-na-otu Android Windows Manager aka jikwaa niile Android window njikwa apps- dị nnọọ a ikuku.
Download iTunes U maka Android ngwa site Google Play.
Wụnye nza nke iTunes U ọzọ ngwa ọdịnala n'ihi Android si PC.
Export iTunes U ọzọ ngwa PC na batches.
Ekekọrịta ọkacha mmasị gị iTunes U maka Android ngwa site Twitter, Facebook na SMS.
Hichapụ achọghị iTunes U maka Android apps na-eme ka ụlọ maka ndị ọzọ.
Ofụri Esịt dakọtara na HTC, LG, Samsung, Google, Motorola, Huawei, Sony na ndị ọzọ.
Rịba ama: The Mac version adịghị ka ị dowload ma ọ bụ òkè ngwa, ma ọ bụ ịkpali ngwa SD kaadị.
Nkwado ndabere na mpaghara weghachite akporo ekwentị na 1 Pịa
Ndabere Android Ozi Computer
Copy Ndi ana-akpo si akporo ekwentị
Ndabere Android na ekwentị PC
Nyefee Data si Blackberry ka Android
Copy Data si iPhone ka Samsung
Paghaa Ndi ana-akpo ka New akporo ekwentị
2 Ụzọ Nyefee Music si iTunes ka HTC One
A Full Guide nyefee Movies, Music na Ọzọ si iTunes ka Android
Na-eme iTunes ndabere Text Ozi / Notes? Olee otú iji weghachi?
Olee otú Record iTunes Radio na-MP3
> Resource> iTunes> Ihe niile unu ga-amata banyere iTunes U na iTunes U maka Android